Echiche | Gịnị kpatara ejikọtara ndị Democrats na Ọdachi - New York Times - TELES RELAY
Echiche | Kedu ihe kpatara ndi ochichi Democrats ji gbasaa - New York Times
Ntugharị Cameroon-n'elu nke Steti: Paul Biya abụghị…
XXX: Ya mere agbanarịrị m afọ asaa n'ụlọ mkpọrọ China -…
Site na mgbochi mgbochi na ejima, nke a bụ ihe kpatara ịchọrọ iji…
Ọ bụghị ọzọ. Na Washington enwere atụmanya nke nkwupụta okwu enweghị nkwupụta, nụ na - eme ihe iji kwado ihe ochie, ihe akaebe nke ga - emebi mmụọ omebe iwu nke Onye isi ala. John Bolton gara n'ihu na ụdị nchekwa nke mba; ọ bụ nwoke ka ọ bụrụ - bụrụkwa ihe atụ maka - oge adịghị ihe ọ bụla na - agwụ, ememme na ihe niile nwere ike ịtụle ma tugharia ya. Bill barr Mkpebi ikpe mara mma. akpan owo ahịrịokwu. Enwere onye nyocha nyocha. Mkpu nke ịghọ aghụghọ na aghụghọ na-efegharị n'akụkụ niile.
M na-ata thentanetị ụta n'ihi dị ka na n'ihi na ọ bụ eziokwu. Ihe m na-ekwu bụ na m na-ata ụta maka etu esi agba ndị mmadụ ume ịhọrọ ozi nke onwe ha na hazie eziokwu nke aka ha, nke mere na enweghị nkwupụta ọ bụla nke gọọmentị na-agbaso usoro izizi banyere anụ ụlọ. M na-ata ụta na ọrịa mba nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Ọ dị m ka ọ bụ na mmadụ ole na ole na-adị mfe wepụrụ ha mkpa ha, mkpa ha. Nsonaazụ ọ bụla nke na-adịghị amasị ha bụ ipso facto a bastard.
“Aljụ inye ndị meriri emeri iwu na-achịkọta ọtụtụ ihe banyere Amerika taa: nnabata okwu anyị; agbụrụ na-enweghị atụ nke na-akpali arụmụka anyị; ịrị elu nke n'otu n'otu dị elu karịa ebumnuche nkịtị; ethos nke onye obula kwesiri ma nwee ike inwe mmeri kwa ubochi, " M dere n'oge ntuli aka nke onye isi ala gara aga, m na-eche ma ọ bụ usoro gafere.
Nan. Nke a bụ ọnọdụ - na-akawanye njọ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla - nke agbụrụ maka ugbu a maka nhọpụta Democratic, nke gụnyere ọtụtụ ndị na - achọ nnụnụ nwere ikike nkọ, ebe a na - eme maka ngaghari, na mpaghara dị nnọọ oke ekwe omume nke nkwekọrịta.
Chegodi na Sanders - otutu, ma otutu ndi sonyere - ajuputara nhoputa ndi a. Ya na ọtụtụ ndị na-akwado ya ga-ekwu na e raara ndị ntuli aka Democratic, na ha agaghị abụ ihe ọjọọ. Ha nwere ike iwe oke iwe hapụ nhọpụta nke otu, na-akwado Trump.
Ugbu a chee echiche nke ọzọ: n'agbanyeghị Sanders enweghị ọtụtụ, ndị Democrats ndị na-anọghị n'ụgbọ okporo ígwè ya na-atụ ụjọ na ha agaghị agba ya, ya mere, iwu na ọnọdụ ndị a na-eme ka edobere kpamkpam iji hụ na onye akwukwo ndoro-ndoro ochichi nochite anya onye ozo dika otu o siri kwe omume. etinyere ya nke ọma. Nke Ya nhọpụta ahụ ga-ahụta na ezighi ezi na ụfọdụ okirikiri, na-eyi egwu ịdị n'otu nke ndị ọzọ egwu.
Ihe ga - echekwa ọnọdụ abụọ bụ nnabata na nkwanye ùgwù site n'aka ndị Democrats na-enwetaghị ihe ha chọrọ na mmetụta mgbu na-adịgide adịgide enweghị isi. Mana echiche a - ntozu a - na-alaghachi azụ.
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) NEW YORK TIMES
Google gbara akwụkwọ na America maka inyocha ụmụaka
2020 CHAN nkwadebe: Cameroon ga-adọta megide Congo
Ntugharị Cameroon-n’elu nke Steti: Paul Biya abụghị Alassane Ouattara
XXX: Ya mere agbanarịrị m afọ asaa n'ụlọ mkpọrọ China - xnxx
Site na ahụike mgbochi rue na ejima, nke a bụ ihe kpatara ịchọrọ ibido na…
Saudi Arabia: Ndị otu atọ nke ezinụlọ ezidere - New York…